खनाल अस्पताल भर्ना भएका बेला एकाएक माधव नेपाल निवास किन पुगे देउवा र प्रचण्ड ? — Imandarmedia.com
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र दादागिरी मच्चाएको भन्दै बरिष्ट नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल एक भएकाे लामो समय हुन् लाग्यो । यतिबेला नेता खनाल स्वास्थ्यमा आएको समस्याका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
यहि समयमा यता माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नै निवासमा बोलाएर बैठक सुरु गरेका छन् । एमाले नेता लाई भेट्न प्रचण्ड र देउवा २ जना उनको निवास पुगेका छन् । नेपालको सचिवालयका अनुसार देउवा पहिला पुगेका थिए भने त्यसको केहीबेर पछि प्रचण्ड पनि नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका हुन् ।
अहिले तीन नेताबीच छलफल चलिरहेको नेपाललको सचिवालयले जानकारी दियो । पछिल्लो समय एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु पार्टी एकताका लागि संवादमा रहेकै बेला देउवा र प्रचण्ड नेपाललाई भेट्न उनको निवास पुगेका हुन् ।
नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसालले पछिल्लो समसामयिक विषयमा छलफलका लागि तीन नेताबीच भेट भएको बताए । ‘उहाँहरु भेटिरहनु भएको छ । कहिले बुढानिलकण्ठ, कहिले कोटेश्वर, कहिले कता । यो सामान्य भेटघाट हो,’ भुसालले भने ।
एमालेको संस्थापन पक्षसँग संवादमा रहेका नेपाल निकट एक नेताका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०७५ जेठ २ मा कायम पार्टी संगठनका बैठक बोलाउन र फागुन २८ यताका निर्णय सच्याउन करिबकरिब तयार भएका छन् ।
तर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा गरिएको २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान ओली पक्षले राखेको छ । नेपाल पक्षले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिए हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुने अडान राखेको छ ।
यस्तै उता नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले ७ प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको छ । संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै केपी शर्मा ओली पक्षका ७ जनालाई निलम्बन गरेको हो ।
माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत भएको संसदीय दलले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिन ह्वीप जारी गरेको थियो । तर ओली पक्षका सांसद लिलाधर भट्ट, नेपालु चौधरी, रतन थापा, पठानसिंह बोहरा, ग्याल्बु बोहरा, माया तामाङ र बलदेव रेग्मीले विपक्षमा मत दिएपछि दल नेता प्रकाशबहादुर शाहले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । यस्तै उनीहरुले संसदीय दलको ह्वीप विपरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सोमबार बसेको दलको बैठकले उनीहरुमध्ये केहीलाई ७ र केहीलाई १० दिनका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले जानकारी दिइन् । संसदीय दलको बैठकमा ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि सहभागी थिए । संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नभएकाले निलम्बन गलत भएको ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले बताए ।
यसैबीच राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारको दबाव र प्रभावका कारण आफ्नो पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यमाथि ह’त्या दुरुत्साहनको आरोपमा जाहेरी दर्ता गरिएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
प्रदेशसभा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद वैद्यले महात्मा गान्धीको ह’त्यारा नाथुराम गोड्सेको नाम लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आफू गोड्से बन्न तयार रहेकोभन्दै संसदीय मर्यादाविपरित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीविरुद्ध आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा सत्तारुढ एमालेको भातृ संगठन युवा संघका जिल्ला सदस्यले हत्या दुरुत्साहनको आरोपमा मुद्दा चलाउन जाहेरी दर्खास्त दर्ता गराएका हुन् ।
कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान अवस्थामा देशमा व्याप्त चरम निराशा र यसबाट उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितीको विश्लेषण गर्दै उदाहरणको क्रममा भावावेशमा आएर प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् ।
‘वैद्यको अभिव्यक्ति पार्टीको आदर्श, नीति र संसदीय अभ्यास र गरिमा विपरीत भएकाले अभिव्यक्ति फिर्ता लिन लगाएका हौं । सदनको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखलाई औपचारिक रुपमा अनुरोध गरिसकेका छौं । सोहीअनुसार रेकर्डबाट समेत हटाइसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारको दबाव र प्रभावमा हत्या दुरुत्साहनमा प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको हनन् गर्दै प्रदेशसभाको मानहानी गर्ने कार्य नेपालको संविधानको बर्खिलापमा रहेको र प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीलगायत सरकारका कुनै पनि निकायलाई यसो गर्ने कानूनी अधिकार नभएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँको दाबी छ ।
उनले प्रहरीले जोहरी दर्ता गरेर संवैधानिक मूल्यमान्यता र संसदीय अभ्यासमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्था विधिका शासन र प्रचलित कानुनविपरित गरेको यस्तो कार्यको आवश्यक परेमा प्रदेशसभामा सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौं,’ उनले भने ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको थप विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आज थप ३३ जिल्लाका ६५ स्थानको क्रियाशील सदस्यता नामावली पार्टीको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
एमाले बैठकमा झण्डै कुटा कुट, माधव नेपालले यतिसम्म भनेपछि ओलीले यसो गरे
कहिले हुँदैछ कक्षा १२ को परीक्षा ? भर्खरै आयो यस्तो जानकारी
देउवा प्रधानमनत्री बनेपछि अमेरिकाले के भन्यो ?
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, साझ ६ बजे शपथ ग्रहण
१० बुँदे सहमतिबारे रामकुमारी झाँक्रीले के भनिन ? फेसबुकमा लेखिन यस्तो कडा स्टाटस